လက်ပ်တော့အပေါ် TOUCHPAD ကိုကို DISABLE - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
touchpad - ။ အဆိုပါ touchpad ကို၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တစ်ဦးလက်ချောင်းများ၏ထိတွေ့မှုမှတုံ့ပြန်အထူးသထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို Laptop, netbook များကြောင့်ခရီးဆောင် device များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအာရုံခံကိရိယာက။ တစ်ဦးကိုအစားထိုး (အခြားရွေးချယ်စရာ) သာမန်ကြွက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မဆိုခေတ်မီ Laptop ကိုတစ်ဦး touchpad ကိုတပ်ဆင်ထားပေမယ်ကြောင့် disable လုပ်ဖို့က၎င်း၏မလွယ်ကူပါဘူးဆိုလက်တော့ပေါ်ထွက်လှည့်ပုံကိုဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ် ...
အဘယ်ကြောင့် touchpad ကို disable?
ဥပမာအားဖြင့်, ငါ့ Laptop ပုံမှန်အတိုင်း mouse ကိုချိတ်ဆက်နှင့်တယောက်ကိုတယောက်စားပွဲပေါ်မှာကနေရွှေ့ - အတော်လေးရှားပါးပါတယ်။ ထို့ကြောင့် touchpad ကိုငါမသုံးကြဘူး။ ကီးဘုတ်မှာအလုပ်လုပ်မယ့်အခါ, မတော်တဆ touchpad ကိုရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုထိ - ။ မျက်နှာပြင် cursor, ဤကိစ္စတွင်ခွဲဝေချထားပေးရန်နှင့်စသည်တို့ကိုဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းဒေသများမီးမောင်းထိုးပြခြင်း, တုန်လှုပ်ဖို့အစပြု - အကောင်းဆုံး option ကို touchpad ကိုတစ်ဦးပြည့်စုံပိတ်ပါလိမ့်မယ် ...
ဤဆောင်းပါး၌ငါလက်တော့ပေါ်မှ touchpad ကို disable လုပ်ဖို့နည်းလမ်းအနည်းငယ်စဉ်းစားရန်လိုကြသည်။ ဒါရဲ့ start ပါစေ ...
1) function ကိုသော့ပြီးနောက်
အများဆုံးမှတ်စုစာအုပ်မော်ဒယ်များတွင် function ကိုသော့ (F1 ကို, F2, F3, etc) တို့တွင် touchpad ကို disable လုပ်ဖို့နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်သေးငယ်တဲ့စတုဂံ (တစ်ခါတစ်ရံ, ထိုခလုတ်ကိုစတုဂံ, အလက်များအပြင်၌, ဖြစ်နိုင်ပါသည်) နဲ့အတူမှတ်သားသည်။
touchpad ကို Disable - Acer 5552g ပုံစံမျိုးရယူ: တစ်ပြိုင်နက် FN + F7 သော့ကိုနှိပ်ပါ။
သင် touchpad ကို disable လုပ်ဖို့ function ကိုခလုတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုပါက - လာမယ့် option ကိုသွားပါ။ အဲဒီမှာသည်ဆိုပါက - ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းပြချက်၏စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်နိုင်သည်:
ယာဉ်မောင်း၏ 1. ကင်းမဲ့ခြင်း
ဒါဟာ (ကတရားဝင် site မှ သာ. ကောင်း၏) ကိုယာဉ်မောင်းကို update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ သငျသညျ auto-များအတွက် software နှင့်ယာဉ်မောင်းကိုသုံးနိုင်သည်:
2. BIOS ထဲမှာ function ကိုသော့ပိတ်ထားပါ
(ကျနော် Dell က Inspirion လက်ပ်တော့မြင်လိုပဲဥပမာ), BIOS ထဲမှာလက်ပ်တော့အချို့မော်ဒယ်များတွင်သင် function ကိုသော့ပိတ်ထားနိုင်သည်။ , ဒီကို fix, BIOS ထဲမှာ BIOS ကို (Input ကိုခလုတ်သို့သွားရန်: ထို့နောက် ADVANSED သွားပြီးအပိုဒ်ဖို့အာရုံကိုဆွဲငင်သော့ချက် (လိုအပ်သောလျှင် setting ကိုပြောင်းလဲစေ) function ။
Laptop ကို Dell က: function ကိုသော့၏ပါဝင်
3. Broken Keyboard ကို
အတော်လေးရှားပါး။ အများစုကတော့ခလုတ်ကိုအောက်မှာ (ချစ်ပ်) အချို့အပျက်အစီးများရရှိသွားတဲ့ဒါကြောင့်ညံ့ဖျင်းအလုပ်လုပ်မှစတင်သည်။ ဒါဟာနှင့် key ကိုခက်ခဲအလုပ်အပေါ်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကီးဘုတ်ပျက်ကွက်၏ဖြစ်ရပ်တွင် - များသောအားဖြင့်ကလုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ...
2) touchpad ကိုအပေါ်တစ်ဦးခလုတ်ကိုမှတဆင့်ပိတ်မည်
အဆိုပါ touchpad ကိုပေါ်လက်ပ်တော့များအပိုင်း (များသောအားဖြင့်အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသည်) အပေါ် / ချွတ်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့ခလုတ်ကိုဖြစ်ကြသည်။ အလုပ်တခုကိုချွတ် - - ဤကိစ္စတွင်အတွက် (မှတ်ချက်မပါဘဲ) ပေါ်မှာကလစ်နှိပ်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်း ....
Laptop ကို HP က - (ထိပ်, left) ကို touchpad ကိုခလုတ်ပိတ်လိုက်ပါ။
3) Windows ကို Control Panel ထဲကမောက် setting များကိုပြီးနောက် 7/8
Windows အ Control Panel ထဲကမှ 1. Go ကို, ထို့နောက် mouse ကိုဆက်တင်များသို့သွားဖြစ်လျှင်, အပိုင်း "ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ" ဖွင့်လှစ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ Screenshot ကိုကြည့်ပါ။
သငျသညျ (အစားမကြာခဏ Windows ကိုသတ်မှတ်ပေးသောက default, ၏) မှာ "ဇာတိ" ယာဉ်မောင်း touchpad ကိုရှိပါက 2. - သင်အဆင့်မြင့်ဆက်တင်ရှိရမည်။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌က Dell က Touchpad tab ကိုဖွင့်လှစ်, နှင့်အဆင့်မြင့်ဆက်တင်ကိုသွားရ၏။
3. ထိုအခါအရာအားလုံးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: switch သည်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်အပေါ်သေတ္တာများနှင့်မဟုတ်တော့ touchpad ကိုသုံးပါ။ စကားမစပ်, ငါ၏အမှု၌လည်းက touchpad ကိုအပေါ် left ပေမယ့်လျှောက်လွှာ mode ကိုအတူတစ် option ကိုခဲ့ပါတယ် "Disable လုပ်ထားမတော်တဆဝါးကိုခံရ၏။ " ရိုးသားစွာငါထင်, ဒီ mode ကိုစမ်းသပ်မပြုခဲ့ပါသေးမတော်တဆဖိခံရ, ဒါကြောင့်လုံးဝကို turn off ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
1. ထုတ်လုပ်သူရဲ့ website ကိုသွားပြီးအဲဒီမှာက "ဇာတိယာဉ်မောင်း" ကိုဒေါင်းလုဒ်။ အသေးစိတ်:
2. သင့်ရဲ့ system ထဲကနေလုံးဝကားမောင်းသူ Remove နှင့် Auto-ရှာဖွေရေးနှင့်ယာဉ်မောင်း Windows ကို Auto-installation ကိုပိတ်ထားပါ။ ဒီအကြောင်း - ဆောင်းပါးအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်။
4) operating system ကိုကို Windows 7/8 (ရလဒ်အနေဖြင့်ယာဉ်မောင်းကိုဖယ်ရှားရန်: အဆိုပါ touchpad ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး)
မောက်၏ setting ကိုအတွက် touchpad ကို disable လုပ်ဖို့မျှအဆင့်မြင့်ဆက်တင်ရှိပါတယ်။
ရောနှောထားသော mode ကို။ အလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်ကားမောင်းသူ Remove, ဒါပေမယ့် Windows7ကို (8 နှင့်အတက်) ကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်နှင့်တစ်ဦးကို PC နဲ့ချိတ်ဆက်နေသည်သမျှသောပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ပြီး။ ဒါဟာသင်က Windows7ကို Windows ဒါမှမဟုတ် Microsoft က web site ကို folder ကိုဖြစ်စေရှာနေတော်မမူကြောင်းယာဉ်မောင်း၏ Auto-installation ကို disable လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
Windows တွင်အလိုအလျောက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ကားမောင်းသူ installation ကို disable လုပ်နည်း 1. 7/8
1.1 ။ (- ကို Windows 8 မှာ Start မီနူးကနေ Tab ကို Run ကိုဝင်း + R ကိုသော့ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဖွင့်နိုင်ပါသည် kavchek Windows7ကိုမပါဘဲပါ။ ) tab ကိုဖွင့်ပါနှင့်ရေး command 'gpedit.msc "ဖျော်ဖြေမည်။
Windows7ကို - gpedit.msc ။
1.2 ။ ထို့နောက် "ကွန်ပျူတာ Configuration" ကိုချဲ့ထွင် "Administrative Templates", "စနစ်အား" နှင့် "Installing Device များ" နှင့်ကို select "devices များ၏ installation အပေါ်ကန့်သတ်။ "
ယင်းနောက် tab ကို "အခြားမူဝါဒက setting များကိုဖွငျ့ဖျောပွထားမဟုတ် devices များကာကွယ်ဆေး installation ကို" ဖွင့်လှစ်။
1.3 ။ အခုတော့ "Enable" ဟုအဆိုပါ setting များကိုကယ်တင်ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာ reboot box ကိုစစ်ဆေးပါ။
တစ်ဦးကို Windows system ကနေ device ကိုနှင့်ယာဉ်မောင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့ 2.
2.1 ။ သငျသညျထို့နောက် tab ကို "ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ" နှင့်ပွင့်လင်းခြင်းငှါ, Windows မှာ Control Panel ထဲကကိုသွား "Device Manager ။ "
2.2 ။ ထိုအခါရိုးရှင်းစွာ, အပိုငျး "ကြွက်တွေကနှင့်အခြားညွှန်ပြ devices များ" ကိုရှာဖွေသင် menu ကနေဒီ option ကိုပယ်ဖျက်ပြီး select လုပ်လိုသော device ကိုပေါ်မှာ right-click လုပ်ပါ။ တကယ်တော့သောနောက်, သင်ကိရိယာနှင့်ကသင့်ရဲ့တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲမတပ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်များအတွက် Windows ကိုယာဉ်မောင်းလည်ပတ်မနေသင့် ...
5) BIOS ထဲမှာ touchpad ကိုပိတ်ထားပါ
, BIOS ထဲဝငျဖို့ကိုဘယ်လို -
ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလက်ပ်တော့များအားလုံးမော်ဒယ်များကထောက်ခံ (သို့သော်အချို့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်) မပေးပါ။ , BIOS ထဲမှာ touchpad ကို disable လုပ်ဖို့, သင်အပိုင်းအဆင့် Advanced ကိုသွားဖို့လိုပါတယ်, ဒါအတွက်ပြည်တွင်း Device ကိုလိုင်းညွှန်ပြပြီးတွေ့ပါ - ပြီးတော့ရိုးရိုးယင်း၏ mode ကို [မသန်စွမ်း] perevidite ။
ထိုအခါ setting များကိုကယ်တင်နှင့်မှတ်စုစာအုပ် (Save နှင့်ထွက်ပေါက်) reboot ။
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ရိုးရှင်းစွာ touchpad ကိုအချို့ကတ်များ (သို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်) ကိုပိတ်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးစက္ကူပင်ရုံအပိုင်းအစကြောင်းပြောကြသည်။ တစ်ခု option ကိုလည်း, မူအရကျနော်အလုပ်မှာထိုကဲ့သို့သောစက္ကူတားဆီးခဲ့ကြပေသည်ပေမယ့်။ သည်အခြားကိစ္စရပ်များတွင်, အရသာနှင့်အရောင် ...